Safaaradda Mareykanka ee Haiti digniinta safarka: Muwaadiniinta Mareykanka iyo dalxiisayaasha ayaa tagaya!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Haiti » Safaaradda Mareykanka ee Haiti digniinta safarka: Muwaadiniinta Mareykanka iyo dalxiisayaasha ayaa tagaya!
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Haiti • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Safaaradda Mareykanka ee Haiti ayaa maanta soo saartay digniin dhanka socdaalka ah, waxayna ku boorisay muwaadiniinta Mareykanka inay isaga baxaan dalka Haiti oo aysan u safrin Haiti. Waa 1-da subaxnimo ee Khamiista dalka Haiti, safaaradduna way xiran tahay, shaqaaluhuna waxay ku sugan yihiin hoy ay ku sugayaan duufaanta Irma oo ku dhufatay jasiiradda.
Digniintan ayaa sheegaysa in muwaadiniinta Mareykanka ee degan iyo kuwa ku safraya Haiti ay ka feejignaadaan fatahaadda. Marka la eego duufaanta soo socota, waxaa jira waqti xaddidan oo la heli karo si badbaado leh oo hawada loo maro. Waaxda Arrimaha Dibedda ayaa u ogolaatay shaqaalaha aan degdegga ahayn iyo xubnaha qoyska inay ka baxaan Haiti ka hor duufaanta. Waxaan kula talineynaa muwaadiniinta Mareykanka inay ka baxaan Haiti kahor imaatinka duufaanta. Garoomada diyaaradaha ayaa la filayaa inay xirmaan haddii xaaladdu xumaato. Safaaradda ayaa mamnuucday dhammaan safarrada shakhsi ahaaneed ee waqooyiga Port-au-Prince waxayna baajisay qorshayaashii safarka ee dhammaan shaqaalaha imanaya ilaa ay ka gudubto khatarta.
Muwaadiniinta aan awoodin inay dhoofaan waa inay hoy ka dhigtaan meel ammaan ah.
Xarunta Duufaanta Qarankahttp://www.nhc.noaa.gov) ayaa sheegaysa in Duufaanta Irma ay tahay mid xooggan, halis ah qaybta 5 oo leh dabayl badan iyo roobab culus. Saacada duufaanta ayaa la soo saaray xeebaha waqooyi ee Haiti waxaana saacada dabaylaha kulaylaha ah laga soo saaray aagga Le Mole St. Nicholas ilaa Port-au-Prince. Waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso dhammaan safarka aan muhiimka ahayn ee Haiti. Shaqaalaha safaaradda iyo qoysaskooda ayaa lagu amray in ay meel gabaad ka dhigtaan laga bilaabo 1: am 00 Khamiista, Sebtember 7.
Safaaradda waxay yeelan doontaa shaqaale aad u yar Khamiista iyo Friday, bixinta adeegyada degdegga ah oo keliya muwaadiniinta Maraykanka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Hurricane Irma ayaa laga heli karaa safarka.state.gov iyo Hay'adda Ilaalinta Madaniga ah ee Haiti website iyo Twitter (ee Creole).
Tweeter-ka ay ku jiraan liiska hoyga: https://twitter.com/USEmbassyHaiti
Muwaadiniinta Maraykanku waa inay ogeysiiyaan qoyska iyo asxaabta ku nool Maraykanka halka ay ku sugan yihiin, oo ay si dhow ula xidhiidhaan hawlwadeenkooda dalxiiska, shaqaalaha hudheelka, iyo saraakiisha degaanka wixii tilmaamo ka bixitaan ah. Muwaadiniinta Mareykanka ee tixgelinaya imaatinka Haiti si ay uga caawiyaan dadaallada soo kabashada duufaanta ka dib waa in ay ogaadaan in howlahan ay aad u adkaan doonaan in la fuliyo iyada oo aan la helin qorshooyin hoy oo sugan, il koronto oo madaxbannaan, sahayda cuntada, biyaha, iyo shidaalka, gaadiidka wadada, iyo luqadda Creole.
Xaaladaha degdega ah ee ku lug leh muwaadiniinta Maraykanka ee Haiti, fadlan wac 509-2229-8000.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan duufaannada iyo u diyaargarowga duufaannada ayaa laga yaabaa in laga helo annaga "Xilliga Duufaanta-Og intaadan Tagin" bogga internetka, iyo "Masiibooyinka dabiiciga ah”bogga Xafiiska Arrimaha Qunsuliyada ee mareegta.
Waxaan si adag ugu talinaynaa in dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee u safraya ama degan Haiti iska diwaan geliyaan Waaxda Gobolka si ammaan ah oo onlayn ah. Barnaamijka Diiwaan Gelinta Safarka (TALLAABADA). Isdiiwaangelinta STEP waxay ku siinaysaa wararkii ugu dambeeyay ee amniga waxayna kuu fududaynaysaa safaarada Maraykanka ee kuugu dhow inay kula soo xidhiidho xaalad degdeg ah.